मुख्य आरोपी जोगाएर मनोजको पुनको ‘फेक इन्काउन्टर’ ! फेक इन्काउन्टर हो, अनुसन्धान गर्छौँ : मानवअधिकार आयोग « Dhankuta Khabar
समय : 1:01 AM
यो एउटा ‘फेक इन्काउन्टर’ थियो भन्ने बुझ्न गहिरो अनुसन्धानमा जानै पर्दैन, घटनाका केही तथ्य पर्याप्त छन्।
अर्को, यति लामो समयसम्म विदेशमा लुकेर बसेका अभियुक्त बिहान ३ बजे नेपाल किन छिर्छ? ऊ नेपाल छिरेको रातारात काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई कसरी थाहा हुन्छ र तुरुन्त सिआइबीका अंगुर जिसी नेतृत्वको टिम रातारात रुपन्देहीको देवदहमा पुगेर कसरी ‘एक्सन’ लिन्छ?
‘गौचन हत्या र दावा लामालाई गोली मेरो योजनामा भएको हो। सम्पूर्ण टिममा खटिने व्यवस्था लोप्साङ लामाले गरेको हो। मनोज पुनसँग दुर्गा तिवारीको हत्यापछि अलग भइसकेका छौं। हामीसँग छैन ऊ,’ बस्नेतले त्यही पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको अडियोमा भनेका थिए।
इन्टरनेटमार्फत् आएको त्यो फोन कहाँबाट गरिएको थियो र फोनकर्ता मनोज नै हुन् या हैनन् अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकै थिएन। तर छानबिन सकिएर अनुसन्धानको निश्कर्ष नै आए जसरी प्रोजेक्सन गरिएको थियो – हत्यारा मनोज पुन नै हुन्।
नेपालका गुन्डा नाइकेहरुको विदेशमा जस्तो नेतृत्व उत्तराधिकारीमा सिफ्ट हुने ट्रेन्ड छैन। न मनोज कुनै नेताको संरक्षणमा नै थिए जसका कारण पक्राउ पर्दा दबाबले छोड्नुपर्ने खतरा हुनसक्थ्यो। त्यसो भए इन्काउन्टर गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो त? के अर्को महिना प्रहरी प्रमुखमा हुन लागेको नेतृत्व परिवर्तन अगाडि प्रहरी अधिकारीले एमालेका नेताहरुका हत्या आरोपीलाई ढलाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘गिफ्ट’ दिएका हुन्?
मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी गुन्डा नाइके मनोज पुनको इन्काउन्टर फेक भएको दाबी गर्छिन्। अन्सारीले पहिलोपोस्टलाई भनिन्, ‘ प्रहरीको स्टेटमेन्ट र केही दिनदेखि आएका समाचारको आधार हेर्ने हो भने यो इन्काउन्टर फेक देखिन्छ।’
उनी भन्छिन्, ‘ नेपालको कानुन र संविधानले कसैको पनि हत्या गर्ने अधिकार दिएको छैन।’ दिनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टर देखि आयोगले अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवदेन बुझाए पनि प्रतिवेदन पेन्डिङ बस्ने गरेको उनले बताइन्। ‘
पुनको घटनालाई लिएर पनि हामी अनुसन्धान गर्छौ’, अन्सारीले भनिन्।-पहिलो पोष्टबाट
यस्तो छ गुन्डा नाइकेका रुपमा बदनाम कांग्रेस नेता गणेश लामा पक्राउ पर्दा बरामद भएको पेस्तोल र गोली
गौशालको होटलमा गोली चल्यो, गणेश लामा हतियारसहित पक्राउ
चरम यातना दिएर बाबु-आमाले गरे आफ्नै १९ वर्षीया छोरीको हत्या, आमा फरार
कञ्चटमा मुक्का प्रहार गरी श्रीमान्द्वारा श्रीमतीको हत्या